Ịhụnanya dị ka agụụ mmekọahụ Ọ bụ Ụgwọ Ụgwọ Foundation Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home mmekọrịta Ịhụnanya dị ka agụụ mmekọahụ
Inwe agụụ mmekọahụ, ịchụso mmekọahụ, ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ mmetụta nke 'ọchịchọ,' bụkwa ụgwọ ọrụ nkịtị, ma ọ bụ agụụ, nke ndị na-ahụ maka mmiri ozuzo dopamine. Na gburugburu ebe a dopamine na-akpali 'atụmanya' nke ụgwọ ọrụ, ọchịchọ na ọchịchọ. Isi ọrụ ya bụ ịgba anyị ume ka anyị nwee ụmụ, ma anyị chọrọ ịmị nwa ma ọ bụ, mgbe anyị na-eme ịhụnanya.
Ihe ndi ozo nwere ihe di nkpa doro anya - ka ha nweta genes n'ime ozo. Ọ na-eme nke ọma na mkpụrụ ndụ ihe dị iche iche. Ihe kpatara nke a bụ iji mee ka mmiri olulu mmiri dị ike. Inbreeding na-akpata nsogbu mkpụrụ ndụ ihe nketa na nchekasị ahụ ike. Nke a bụ nsogbu n'ọtụtụ obodo ebe ịlụ di na nwunye mbụ bụ ụkpụrụ. Inwe mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ dị iche iche pụtara na ọ bụrụ na ntiwapụ ọrịa ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ dị egwu na ọnọdụ dị ndụ, enwere ike na ụfọdụ ndị ga-enwe ngwakọta mkpụrụ ndụ nke ga-eme ka ha dịrị ndụ.
Orgasm, mmetụta dị egwu nke obi ụtọ nke ọtụtụ ndị bụ ihe mgbaru ọsọ nke mmekọahụ, na-ewepụ ihe ndị na-adịghị na-emepụta ọgwụ ndị na-adịghị na ya, opioids, na anyị nwere ahụmahụ dị ka euphoria. N'oge ahụ, dopamine na-akwụsị ka a na-amanye n'ime ụzọ nkwụghachi ụgwọ. Aghaghaghachila ihe ọ bụla a hapụrụ n'ime usoro dị njikere maka ohere ọzọ iji kpụga anyị ka anyị nwee mgbaru ọsọ ndụ, a na-eme ugbu a.
Ọchịchọ nke inwe mmetụta nke mmetụta obi ụtọ na-akpali anyị imeghachi omume ahụ ugboro ugboro. Nke niile ụgwọ ugwo, orgasm bụ nke na-enye nnukwu ntọhapụ nke dopamine na mmetụta nke obi ụtọ na ụgwọ ọrụ nke ụbụrụ. Ọ bụ ụzọ bụ isi e si eme atụmatụ iji mee ka anyị na-azụ ma na-amụba ụmụ.
Ma enwere ugbo n'ime usoro a, ma oburu na anyi nile ga-ada n'udo ma bie obi uto mgbe o bula, ndi okacha iwu di na nwunye agagh adi kwa aka.
Di na Nwunye Di na Nwunye Mmetụta Coolidge >>